Ukudla Kwami KwasePeruvia - Ukudla Kwami KwasePeru
Ukudla kwami ​​​​e-peruvian
Peru yizwe lase ENingizimu Melika ehlanganisa ingxenye enkulu yehlathi lase-Amazon futhi equkethe elinye lamadolobha amadala ama-Inca ezindaweni eziphakeme I-Andes. Ngaphezu kwalokho, ingumnikazi weSigodi Esingcwele, i-Inca Trail kusukela ezinkulungwaneni zeminyaka edlule, imisebenzi yezandla ehlonishwayo kanye namagugu amakholoni kanye nendawo enkulu yokugcina izinto zakudala ezwenikazi abenza amasiko abo, isiko kanye nomlando obalulekile waziwe.
Ngokunjalo, le ndawo ingumdali nomanduleli wenye yezindawo ukudla best emhlabeni, ezikhuluma futhi ezihlobane nokunambitheka kwazo okuhlukile nezitayela lezo zici zezwe labo, uthando nokuzinikela kwabatolika bazo kanye nezinkulungwane zamathuba okujabulela ukuhlala Peru ngayo yonke iphunga nokuluma.
Le gastronomy isethi ye izitsha ezikhethekile neziphuzo Peru eziyingxenye yempilo evamile namasiko ezakhamuzi zakhona, umphumela wokuhlanganiswa kwesiko lokupheka ledolobha elidala ne-European gastronomy kanye nezinye izinhlangano ukuthi kancane kancane zahlanganiswa kulo.
Iresiphi yezitshulu zenkukhu ngamazambane notamatisi obomvu
Inkukhu ingenye yezithako eziyinhloko zezitsha eziningi ze-Peruvian gastronomy, okuyinto ...
Ingulube ye-Adobo Recipe
Ungasibona ngeso lengqondo isidlo esicebile, esibushelelezi futhi esinoshukela? Uma kunjalo, i-Pork Adobo izoba yisinqumo sakho esingcono kakhulu. Noma nge...
I-Sillao Chicken iyisethulo esikhulu kunazo zonke somnikelo we-Chinese oriental cuisine encwadini yeresiphi kanye ...
Isobho kuze kube umzuzu
I-Soup a la minuta isobho elenziwe ekhaya elingabizi, elilula futhi elisheshayo ukulilungisa, iresiphi yalo ...
Inkukhu efakwe emanzini
I-Chicken Escabeche iyisidlo esijwayelekile se-Peruvian gastronomy, esifinyelele ogwini lwaso ngokusebenzisa ...
Iresiphi ye-tagliatelle ebomvu
Umlando wesitsha esidumile se-noodle esibomvu ubonakala phakathi kweminyaka ye-1840 ne-1880 lapho inani elikhulu ...
ibhulakufesi lokumangala lezingane
Noma yimuphi umcimbi uyithuba elihle lokunikeza isidlo sasekuseni esingalindelekile, futhi nakakhulu uma lesi sidlo esimnandi siqondiswa ...
I-Carapulca enesobho elomile
I-Carapulca enesobho elomile iyisidlo sasePeru, ngokusho kwemibhalo yababhali nabacwaningi abaningi be-gastronomic, ...
I-Patarashca yasehlathini yisidlo esisuka ku-aborigines kanye nezakhamizi zasePeru ngaphambi ...
Imvelaphi yangempela ye-ceviche ngeke yaziwe, ngoba iyisidlo esiphikiswa njengesaso ngamazwe amaningana ...
Ngesikhathi esifanayo, lolu hlobo cuisine ingenye Okubaluleke kakhulu emhlabeni futhi isibonelo salokhu ukudla kwe-fusion ngenxa yomlando wayo omude wamasiko amaningi, osekelwe engxubeni yolwazi oluyisisekelo lwasePeru yasendulo ne-Spanish cuisine ngokuhlukahluka kwayo okunamandla, ubukhona base-Andalusi kanye negalelo logu lwase-Atlantic lwe-Afrika eseningizimu yeSahara yezigqila lapho ukutholakala kwezigqila. indawo yenzeka.
Emhlabeni, ukudla kwasekuqaleni kwePeru kuhluke kakhulu, lapho, ngenxa yencwadi "57 sikulungele ukuqonda ukuthi thina bantu basePeru sinjani” kubalwa kuze kufike 491 izitsha ezijwayelekile. Ngasogwini lwasePeruvia kukhona 2500 izinhlobo ezahlukene zesobho, kanye nama-dessert esintu angaphezu kuka-250 neziphuzo zemvelo ezingu-70 kanye namalungiselelo otshwala. Kodwa, uzozibuza ukuthi kungani lezi zinhlobo zezitsha zikhona? Futhi impendulo sibonga igeography yezwe kusukela esandleni kuya esandleni ingxube yamasiko kanye nokujwayela ezinye izimfundiso zasendulo ku-cuisine yesimanje.
Ipuleti ngalinye liqukethe ama-flavour athambile, amanye axhumene nomkhakha lapho adalwe khona, njengokunambitha kwe um, usawoti ovela ogwini ngisho nombala oshubile nephunga lakho konke okugubuzelwe yilanga elikhazimulayo. Uma kwenzeka kuba izintaba, amakhaza nama-flavour anobumnandi obuncane obuhambisana nezimbali, amaqabunga nezinye izingxenye ezivuselela ukusha nokuthula kwemvelo. Futhi esikhundleni salokho, kweyakhe indawo emaphakathi, okuyiyona ezungezwe izakhiwo, ukunyakaza kwamasiko kanye nemvelo ene-ecliptic ngaphezulu, ukudla imimoya yekusasa futhi emangalisayo icwebezela ekubunjweni, ukungqubuzana ngisho nokuba yinkimbinkimbi kobumo nemibala.
Kodwa-ke, konke lokhu akukude nokukwazi ukunambitha, ngoba abezindaba bangaphandle banikeza ithuba yazi futhi udle izitsha zendabuko kanye nesidingo sikazwelonke ngaphakathi nangaphandle kwePeru emagatsheni ahlukene noma izindawo zokudlela zamazwe ngamazwe, okuvumela abantu bendawo, izivakashi nabangaphandle, ukunambitha, ukwazi nokukhumbula ukunambitheka okubabazekayo kwalo mhlaba omkhulu.
Ngendlela efanayo, amakhasi anemininingwane, abezindaba kanye nezinkundla zokuxhumana, kanye nezinto ezilalelwayo nezibonwayo ezitholakala kumanethiwekhi kanye nezibhengezo zedijithali zomphakathi zihlala zikhona ezibonisa amalungiselelo nesixwayiso sokuthi yonke into engadalwa kuyoba izaba ezidingekayo zokuphinde uzivakashele futhi uqhubeke nokudala.
Kulo mongo futhi ukuze uthole indlela yokuncoma, ukulungiselela nokwabelana ngalezi zitsha, iziphuzo, ama-dessert, amasobho, okomile. Utshwala nokugubha, I-Micomidaperuana ikunikeza okubanzi uhlu lweresiphi, amalungiselelo kanye nezinkomba ukuze ukwazi ukunambitha ubumnandi kanye nobuhle obunambitheka Peru zitholele wena.
Lona ikhasi le-intanethi okukhethekile embukisweni wezinto ezibanzi neziqinisekisiwe ezahlukene zokupheka, konke kuhlelwe ngendlela efanele ukuze ungadingi ukuba umpheki omkhulu ukuze ufinyelele izinga lokubulawa kwabapheki abadumile Peru. Kodwa-ke, hlola kancane kulokhu kubhala futhi uthole izinketho nezinzuzo onazo I-Micomidaperuana uzofinyelela
Njengoba kwafundiswa ngaphambili, I-Micomidaperuana yethulwe njenge- isikhombimsebenzisi esiku-inthanethi igcwaliswe nge amalungiselelo amaningi izitsha eziyizifanekiselo, zendabuko nezidume kakhulu zasePeru; kanye nalokho kudla okubalulekile, okunesibindi, kwakudala, kwesimanje ngisho kwamanje idolobha lonke elisinikeze lona futhi abaningi abavele bavela ukuze bathakathe futhi basimangalise esikhathini samanje.
Leli khasi linenjini yokusesha equkethe enkulu ikhathalogi yokuqukethwe. Kulokhu, kuzobhekwa amalungiselelo, zokupheka, step by step imiyalelo, kanye nokulandisa okufushane komlando kanye namanye amaqiniso anelukuluku lezitsha ezihlukahlukene ezisakazwa ngokwendawo yokulungiselela kanye namasiko.
Ngendlela elandelayo, i- okuqukethwe kwekhasi nokusatshalaliswa kwayo:
Ngaphezu kwalokho, inikeza injini yokusesha yomuntu siqu lapho ungangena khona ukuze useshe imigqa ehlukene ezigabeni ezilandelayo zasekhishini:
Lesi isitayela sasekhishini sakamuva kakhulu Peru njengoba kuthatha zokupheka kusukela i-prehispanic edlule ukuzidala kabusha, ukuhlenga kanye nokwazisa izithako zomdabu zezwe. Lapha kuza ukudla kwendabuko okufana ne-tarwi, i-chuño, i-quinoa, i-kiwicha, i-moraya, i-cochayuyo, i-maca, i-coca nehansi.
Ukufika kwabantu baseSino-Cantonese
Kulolu hlobo lokudla, injini yokusesha iphonsa zonke lezo zitsha lapho ilayisi ube umngane noma ngempela, ube yisithako esiyinhloko. Siyabonga ku Ukufuduka kwamaShayina aseCantonese, ama-flavour avela e-Asia ahlanganisiwe futhi abangela ezinye izindlela zokupheka ezethulwa ngaphakathi kwe ikhasi lewebhu njengoba isuka ePeru ngokuphelele kodwa enezimpande nokungenelela okuvela kwamanye amazwe ngezinga elincane.
Umcebo we inhlanzi ezilwaneni zasePeru, zinkulu, ngakho-ke ukudla kuye kwajwayela la magugu emvelo. Phakathi kwalolu hlobo kukhona izinhlobo ze-chupe, njenge-ceviche, izimbaza zesitayela se-chalaca, i-tiradios ne-seco.
Ukudla kwesiCreole kunesikhathi sako sokuqala Ngekhulu le-XNUMX futhi iyinhlobonhlobo etholakala emadolobheni asogwini ngesikhathi seViceroyalty yasePeru. Lapha kuvezwa konke ukudla phakathi kwekhulu leminyaka XNUMX no-XNUMX kanye namasu, umlando kanye nezitsha ezikhethekile.
Kule ngxenye engenhla yezwe, njengoba i-Andes, ukudla kusekelwe amazambane, ummbila nemifino sibambene nokwethulwa kwerayisi, isinkwa ne-pasta kanye nenyama efana ne-lama, i-alpaca nezilwane zasendle. Ngokusekelwe kulezi zithako ukuthi izindlela zokupheka ikhasi eliziphonsa kumthengi zakhiwe
konke ukudla nge ukugqoka, amasoso kanye noketshezi Ihambisana nezitsha zehlathi, ezihambisana nemifino eyomile futhi cishe ephekwe noma ngaphandle kokunemba okuningi.
Kule nketho faka okuhlukile ama-cocktails neziphuzo ezidakayo. Kanye nawo wonke amalungiselelo abandakanya okuqinile ngewayini noma eminye imikhiqizo evutshiwe.
Ngaphakathi kwekhasi ungasesha izindlela zakho zokupheka ezisuselwe ku isithako esiyinhloko ukusebenzisa, ezoveza konke amafomula atholakalayo yalo mkhiqizo wenkanyezi.
Labo izithako ezifunwa kakhulu futhi ezisetshenziswa ethulwa maduze, ngakho-ke unombono wokuthi yini okufanele uyibheke, eguqulelwe kulokho okuvame ukusetshenziselwa amalungiselelo asePeruvia.
Izinhlanzi, i-shellfish nama-crustaceans
ingulube ye-Guinea noma i-Guinea pigs
Zonke izitsha ezivela ePeru kukhona okubalulekile nje emphakathini wasekhaya nowamazwe ngamazwe, noma ngenxa yomlando wawo, izifanekiselo noma ngenxa nje yokunambitheka kwawo okuyingqayizivele nokungenakuqhathaniswa.
Kodwa-ke, kukhona ezinye izitsha ezigqama ngomfutho omkhulu wokuba amagugu kanye nesiko lomuzi. Ezinye zazo zitholakala zicwiliswe ngaphakathi I-Micomidaperuana futhi achazwa ngokubekezela nokugcina isikhathi; izihloko zabo zimi kanje:
irayisi inkukhu animated
U-Doña Pepa unogat
Iphalishi eliphephuli nequinoa
Ayini amaresiphi enjini yokusesha?
I-Micomidaperuana iqukethe ibhuku leresiphi elinokuningi 100 amafomula kusakazwa ngokohlobo lwesitsha noma isiphuzo esizothunyelwa. Lokhu ngenhloso yokukhangisa ngesimangaliso se-Peruvian cuisine, ubumnandi bayo, ukunambitheka, ukungaguquguquki, iphunga nokuthungwa, okunikeza abantu bendawo kanye nezivakashi ithuba lokudla. hlola umlando nesiko layo esethulweni esisodwa.
Ngokunjalo, lena yisizindalwazi inhloso yayo wukuvumela umcwaningi ngamunye lungisa izitsha ezahlukahlukene ngokunethezeka kwanoma ngabe ukuphi, ngezithako ezilula futhi ezimnandi kakhulu kanye nenani olifunayo, ngakho-ke akudingekile ukuya endaweni yokudlela futhi khansela izindleko eziphezulu izitsha ezinjalo ezingokomfanekiso nezithobekile ezihlinzekwa yidolobha lasePeru.
Ngendlela efanayo, iyisikhulumi esiphonsa zonke izivakashi zayo, zokupheka super lula lokho okungekho udinga ukuba umpheki onolwazi kakhulu ukuze uphinde uwakhiqize. Okuwukuphela kwento edingekayo iqala ngokuchazwa okuhle nokugxila lapho upheka, zonke izithako kanye nesimo sengqondo esihle lapho uqala.
Uma kwenzeka kunesifiso sokusungula noma yikuphi ukuxhumana neplatifomu, I-Micomidaperuana unayo izindlela ezilula nezinethezekile zokuxhumana ukuze uveze ukungabaza kwakho, izinkinga noma izifiso zakho kubaphathi nabaphathi bewebhu, okuthi esikhathini esithile baphendule isicelo sakho noma ilungelo lakho ukuze ukuhlala kwakho nezidingo zakho zixazululwe.
Le medium yethulwa njenge-a ifomu eyakhiwe kanje:
Igama: Le datha iyadingeka ukuze unikeze a Identity kumnikazi wesicelo, njengoba kuzoba yisidingo esiyisibopho sokubhekisa kumuntu uma ephendula noma efuna ukunakwa
Imeyili electronic: Abanikazi bekhasi bazothumela izimpendulo ku-imeyili yakho, yingakho leli kheli libalulekile
Isihloko: Lena indawo lapho uzonikezwa khona a isihloko noma impikiswano yomlayezo. Inesikhala esincane ngakho-ke incazelo kufanele ibe mfushane futhi inembe
Mensaje: Kulesi sikhala ungakwazi tshela noma yikuphi ukuphazamiseka noma isidingo okudingeka usiphazamise. unayo a Isikhala esikhulu lapho ungakwazi ukuveza ngokunethezeka nangenkululeko konke okusihluphayo. Kodwa noma kunjalo, kunconywa ukuthi kucace futhi kuningiliziwe enkingeni noma embuzweni
The best zokupheka ukudla Peruvian